သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ အတွေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ အတွေး
သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ အတွေး
Posted by ဆူး on Dec 10, 2010 in Aha! Jokes, Satire | 12 comments
ဆူး စိတ်ကူး သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ အတွေး
ဇါတ်တော်ထဲမှာ အဂုင်္လိမာလ ဇါတ်ကိုဖတ်တော့
တစ်ခုက အဂုင်္လိမာလ က ပညာတော်တယ်ပြောတယ်
ပြီးတော့ ဆရာကြီးကလဲ ပါမောက္ခ တစ်ယောက်ပဲ
သူတပါးသွေးခွဲစကားကို အစဉ်းစားမရှိ ယုံကြည်လိုက်တာက
ဘာကြောင့်လဲ သူ့မိန်းမနဲ့ သ၀န်တိုလို့ အမြင်ကန်းသွားတာလား
အဂုင်္လိမာလကရော ဆရာခိုင်းတာနဲ့ တော်၏ရော်၏ မစဉ်းစားပဲ
ကဲ အခု အင်္ဂုလိမာလ လက်ညှိုးတွေလိုက်ဖြတ်ပြီ
အဲ့မှာစဉ်းစားစရာက လူမှာ လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းပါတယ်
အဲ့ဒါဆိုရင် လက်ညှိုးတစ်ထောင်ပြည့်ဖို့ လူ 500 ပဲသတ်ဖို့လိုမယ်
ပြီးတော့ လူတွေရဲ့လက်မှာ ဖြတ်လိုက်ရင် လက်ညှိုးလား
လက်သူကြွယ်လား လက်သန်းလာ မသိနိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျ
လူတစ်ယောက်ဆီက လက်ညှိုးပုံစံတူ ရှစ်ခုရပြီဗျာ
အဲ့လိုဆိုရင် လူပေါင်း 125 ယောက်ပဲ သတ်စရာလိုမယ်ဗျာ
ကဲ အဲ့လောက်လူဆိုရင် တော်တော်ကွာသွားပါပြီ
ပြီးတော့ လူမသတ်ပဲ လက်ပဲဖြတ်ယူလိုက်လို့ရတယ်ဗျာ
သုသာန်က သုဘရာဇာနဲ့ လက်ဝါးရိုက်ပြီးတောင် လုပ်လို့ရသေးတယ်
ကဲ ဆရာသမားတို့ရော ဘယ်လိုထင်တုန်းဗျ
ဘုရားဟောဇာတ်တော်ထဲက ဇာတ်လမ်းတွေကို သာမန်လူတွေအနေနဲ့ မဝေဖန်တာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ထင်ပါတယ် …
မဝေ ရေ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားပါတယ်
ဒါကြောင့်လူတယောက်လက်ညှိုး ၂ ခုမရပါဘူး
အလားတူဘဲသုသာန်က သုဘရာဇာနဲ့ လက်ဝါး
ကယ်ကယ်ဖြေရှင်းလိုက်တာ ရှင်းသွားပါတယ် …
အမှန်ကတော့ ဘုရားဟောဇာတ်လမ်းတွေ ဗုဒ္ဓ၀င်တွေမှာ အကျိုးနဲ့အကြောင်း တိတိကျကျပါထားပြီးသားပါ … စောဒက တက်စရာမရှိလောက်အောင်ကို ပြီးပြည့်စုံပြီး မှန်ကန်ပါတယ် ….
အကျိုးအကြောင်း အတိအကျပေါ့… အခုခေတ် ကလိန်ကကျစ် အတွေးနဲ့ တွေးကြည့်မိတာ ဆို မမှားဘူး.. အဲဒီ တုန်းက လူတွေက ဒါဆို ဒါဘဲ.. ဟိုဟာ မရဘူး.. သိပ်ဖြောင့်မတ်ပုံရပါတယ်။
အဲဒီပြဿနာဟာ ဒို့များငယ်ငယ်က ဦးနှောက်စားခဲ့ရတဲ့ ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းမှသိလာတာက အင်္ဂုလိမာလဟာ သူ့ဆရာကိုတပတ်ရိုက်ဖို့ စိတ်ကူး လုံးဝမရှိခဲ့တာပါ။ ခုခေတ်အပြောနဲ့ဆိုရင် နိုင်ယေ့ဖ်(naive) ဖြစ်တယ်ခေါ်ရမ လား မသိဘူ။ လုံးဝဥဿုံရိုးသားမှု လို့ပဲ ထင်မှတ်မိပါတယ်။
တွေးရင်းနဲ့ စဉ်းစားမိတယ်.. လူကြမ်းတွေက ကြမ်းသာ ကြမ်းတာ.. သူတို့ က ရိုးသားကြတယ်။ လူကြမ်းက လူလိမ်မဟုတ်တဲ့ အတွက် လူကြမ်း တွေရဲ့ စိတ်ကို ယဉ်ပါးအောင် လုပ်လို့ ရနိုင်တယ်လို့ ထင်မြင် သုံးသပ်မိတယ်။ လူလိမ် လူကောက်ကတော့ မရိုးသားတဲ့ အတွက် စိတ်ကို ယဉ်ပါးအောင် နူးညံအောင် လုပ်လည်း လိမ်ညာပြီး လိမ်မာချင်ယောင်ဆောင်ပြီး တကယ်တမ်း မလိမ်မာတဲ့ လူတွေ ဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်မိတယ်။
မင်းတို့ ဖတ်ရတဲ့ အဂုင်္လိမာလ ဇါတ် ကမူရင်းမဟုတ်နိုင်သလို စာရေးဆရာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်
သဲအင်းဂူတရားထဲမှာ နာဖူးတာ အင်္ဂုလိမာလ အတိတ်ဘဝတခုမှာတုန်းက အသားထိုရ်တောင် ပြိတ္တာကောင်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသတဲ့။ ရွာနီးချုပ်စပ်ကလူတွေက သူ့ရဲ့အသားကို လှီးဖြတ်စားသောက်ကြတယ်၊ သူက ပါးစပ်ပေါက် ကျဉ်းကျဉ်းလေးပဲရှိတဲ့ ပြိတ္တာဆိုတော့ အော်လည်းမအော်နိုင် အသားတောင်ကြီးလည်းဖြစ်နေတော့ ခံနေရတာပေါ့။ ဘယ်လိုပြောမလဲ မသေမရှင် ပိုးဟပ်ကို ပုရွက်ဆိပ်တွေ ဝိုင်းစားသလို ဖြစ်နေမှာပေါ့။ နောက်ဆုံးဘဝ အင်္ဂုလိမာလရယ်လို့ လူစွမ်းကြီးဖြစ်လာတော့ သူ့ကို အရင်ဘဝတုန်းက ဟိုမှာုအသားထိုရ်တောင်ကြီးဟေ့လို့ အသိမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း လက်ညိုးထိုး ညွှန်ပြတဲ့လူတွေ၊ စားတဲ့လူတွေကို လက်ညိုးဖြတ် လက်စားချေသတဲ့။ တကယ်တမ်းအသတ်ခံရတာ တထောင်မကဘူး၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ရှေ့ပိုင်းမှာ သတ်ပြီးဖြတ်ထားတဲ့ လက်ညိုးတွေကို ငှက်တွေက သုတ်ချီးသွားလို့ နောက်ပိုင်း ဖြတ်ပြီးရင် သူ့လည်ပင်းမှာ ချိတ်သိမ်းထားရသတဲ့။ ပြောချင်တာ အကြောင်းအကျိုးပါ၊ သူ့ကိုလုပ်ခဲ့လို့ သူပြန်လုပ်တဲ့သဘောပါ။ ဒါကြောင့် ပရမတ်သစ္စာမှာ လူဆိုးလူကောင်း၊ သူတော်ကောင်း သူယုတ်မာဆိုတာမရှိဘူး။ အားလုံးက အရိယာမဖြစ်သေးသ၍ တခုမဟုတ်တခု ဖြစ်ခဲ့၊ ဖြစ်ကြအုံးပါမယ်။
ဦးကြောင်ကြီး ပြောတာ ဖြစ်တော့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို မသိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့.. နောက်ဆုံး အကြွေးပြန်ဆပ်တဲ့ အနေနဲ့ အင်္ဂုလိမာလ သုတ် ထားပေးခဲ့တာဘဲ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီပိုစ်ကို ၀ိုင်း စဉ်းစား သုံးသပ်ကြတော့ မသိသေးတာ သိရတာပေါ့။ ဦးကြောင်ကြီး မန်းထားတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒိသာပါမောက္ခတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ မသေချာတဲ့ အထင်လွဲမှုနဲ. (သူတပါးဘ၀ပျက်အောင်) တပည့်ကို ချောက်တွန်းရဲတရ် ……
အဲဒါကြောင့် လူတော်တိုင်း လူကောင်းမဟုတ်ဘူးလို.ကောက်ချက်ချတရ်
(တစ်ကယ့်မျက်မှောက်ခေတ်မှာလဲ ပညာတတ်တဲ့သူများဆိုးလို.ကတော့ လူကယ်လို.မရဘူး။ သူ.တို.ရဲ.ဒဏ်ကိုလဲ ခြားသူတွေတော်တော်ခံရတရ်)
အဂုင်္လိမာလကရော ဆရာခိုင်းတာနဲ့ တော်၏ရော်၏ မစဉ်းစားပဲလုပ်တရ်
ပညာအရမ်းလိုချင်တဲ့ဇောပေါ့။ အမေကိုတောင်သတ်မလိုဖြစ်တဲ့အထိ ပညာလောဘကြီးခဲ့တရ်။
ဒါပေမဲ့ အဂုင်္လိမာလက တရားရမဲ့နောက်ဆုံးဘ၀ဆိုတော့လဲ အဲဒီလိုဆရာ အဲဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ. တွေ.တာလဲဖြစ်နိင်တာပေါ့။ (တချို.လူတွေ တရားရခါနီးရင် အရမ်းဆိုးဝါးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ. ကြုံရတတ်တရ်လို.ကြားဖူးတရ်။ မကောင်းတဲ့ကံတွေ / ဆပ်စရာရှိတဲ့ကံတွေ အကုန်လုံး ထွက်လာတဲ့သဘောပေါ့)
ဘုရားခေတ်ကလူတွေကို ကိုယ့်အသိညာဏ်ပါမွှားလေးနဲ.တော့ ဝေမဖန်ရဲပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားရှင်က နောက်လူတွေ ရှောင်သင့်တာရှောင်၊ ဆောင်သင့်တာဆောင်ရအောင် သာဓက ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ထားခဲ့တရ်ဆိုတော့လဲ …………………………………………
မဆူးရယ် … တွေးမိတာလေးတွေရှိရင် ရေးသာရေး
အင်္ဂုလိမာလဆိုလို့ ငယ်ငယ်က အိမ်မှာ ကြောင်မလေးတစ်ကောင်ရှိတယ် … သူ့မှာ သားအိမ်မကောင်းတဲ့ရောဂါရှိတယ် .. ကလေးမွေးတိုင်းဒုက္ခရောက်တာပေါ့ … ကျွန်မတို့က သူ့ကိုကလေးဝိုင်းမွေးပေးရတိုင်း အင်္ဂုလိမာလသုတ်ကို ရွတ်ပေးတယ် … သူ့ကြောင့် အင်္ဂလိမာလသုတ်လဲ အလွတ်ရပါလေရော … ဆရာဝန်ဆီက ကြောင်ကလေးမွေးနည်းပါ သင်ထားရလို့ ကြောင်ကလေးမွေးနည်းလဲ တတ်ပါလေရော …
သူ.ဆရာက ဘယ်လိုမှာလိုက်တာရော သိစရာပါ။ဒါ ဘုရားဟောအစစ်လား ဋီကာဆရာကြီးတွေရေးထားတာလား စာရေးဆရာတွေက လူဆိုးနေရာကို ဇာတ်နာအောင်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်